धरहरा निर्माणमा धरमर, प्राधिकरणको नियतमाथी नै उठ्यो प्रश्न – Mission Khabar
धरहरा निर्माणमा धरमर, प्राधिकरणको नियतमाथी नै उठ्यो प्रश्न
मिसन खबर ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार ०५:३१
काठमाडौं–राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठूला ठेकेदारको सिन्डिकेटलाई साथ दिदा धरहराको निर्माण बिलम्ब भएको छ । अझ अहिले प्राधिकरणले प्रचलित मापदण्ड भन्दा कम ३० दिने समय दिएर सीमित ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र ठेक्क प्रतिस्पर्धा गराएको भन्दै बिरोध झेलिरहेको छ ।
नेपाली सेना र नेपाल टेलिकमलाई दिने भनेको धरहरा निर्माण कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएर खोसिएका कारण पनि कतिपय सम्पदाप्रेमीहरु केही ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा प्राधिकरण फसेको बताउछन् । यता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेन्डर आह्वान गर्दा साधारण तय ४५ दिने समय दिनुर्पेमा यहाँ ३० दिनमात्र समय दिएर टेन्डर आह्वान गरिएको छ । अझ, दुइवर्ष भित्रमा निर्माण पुरा गर्ने असम्भव कुरा गरेर प्राधिकरणले आम जनमा भ्रम छरिरहेको कतिपयको बुझाई छ ।
झण्डै ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको धरहरा निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमै म बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान चलाएर अर्थ संकलन गरेका थिए । तर दोश्रो कार्यकालका लागि अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चासो नदिएको कतिपयको बुझाई छ । टेन्डर आह्वान गर्दा पछिल्लो दश वर्षमध्ये कुनै पनि तीन वर्षमा ९८ करोड वार्षिक कारोबार हुनुपर्ने सर्त तेर्साएर प्राधिकरणले ठूला ठेकेदार कम्पनीलाई काखी च्याप्न खोजेको छ । यो सर्तले ठूलासँगको मिलेमतोलाई अनुमान गर्न सहज तुल्याएको छ ।
असार भित्र शिलन्यास गरी धरहराको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने बताइएको छ । स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले पनि निरिक्षण गरेर तत्कालै निर्माण सुरु हुने बताएका छन् । तर अहिलेसम्मको उपलब्धी हेर्दा, तत्कालै धरहरा निर्माण सुरु भएर छिट्टै सकिनेमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।
कति छ नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्धता ? लगाउन तछाडमछाड
१चार प्रदेशमा ‘भारी’ वर्षाको पूर्वानुमान, सतर्कता अपनाउन अपिल
२रविन्द्र, महेश र गोकुलले उठाएका संघियता र धर्मनिरपेक्षताका सवाल, चुनावी एजेण्डाका फण्डा !
३अमेरिकाले लगायो दुई चिनियाँ एजेन्टमाथि जासुसीको अभियोग
४मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा सत्तारुढ गठबन्धन, आकांक्षी धेरै हुँदा ढिलाई
५पाकिस्तानस्थित चिनियाँ परियोजनामा कार्यरत कामदारहरुको साथमा बन्दुक